Published on Wednesday, 29 July 2015 02:33
မိခင် (အမေ) ဆိုသော အမျိုးသမီးတို့အကြောင်းအရာကလေးကစတင်ပြီး ရေးသားတင်ပြလိုက်ပါရ စေ။ အမေများကို အားလုံးကချစ်ခင်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားကြလွန်းလို့ပါ။
သားတို့၊ သမီးတို့သည် အများအားဖြင့် မိခင်ကိုပို၍ ချစ်တတ်ကြသည်။ ဘာမျှမသိတတ်သေးသော အူဝဲကလေးအရွယ်ကအစပြုပြီး ‘အေ . . . အေး . . . ရဲ့ . . . အို . . . အို’ ဆိုသော မိခင်၏ချော့သံ လေးကို ကြားဖူးခဲ့ကြသော အူဝဲလေးတို့မှာ ဘာအဓိပ္ပာယ်မှမပါသော မိခင်၏ချော့သံလေးကို ကျေနပ် ခဲ့ကြသည်။ ဘာအဓိပ္ပာယ်မှမပါသော ဆိုသည့်စကားကို ကျွန်တော်သုံးလိုက်ခြင်းမှာ အမှားကြီးမှားပါ လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်မူ အူဝဲလေးတို့တွင် ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုနှင့် အဓိပ္ပာယ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာပါ သောကလေးချော့ အမေ့ကဗျာလေးမှာ အူဝဲလေးတို့အတွက် အဓိပ္ပာယ်များစွာပါရှိတာ နားလည်ကြ၍ ငိုနေရာမှရပ်ခဲ့ကြသည်။ အငိုရပ်ခဲ့ရာမှ အိပ်ပျော်သွားသည်။ အမေ့မေတ္တာရေဖျန်းခံလိုက်ရခြင်းမှာ အေးမြသည်။ ချိုသာသည်၊ နာဝင်ချိုအေးမြပါသည်။
အမေနှင့်အူဝဲလေး နဖူးချင်းထိလိုက်၊ ပါးချင်းကပ်လိုက်ဖြင့် အမေနှင့်အူဝဲတို့အဓိပ္ပာယ်ပေါင်းမြောက် မြားစွာပါသော မျက်စိဖြင့်စကားဖလှယ်နေသော အပြုအမူလေးတို့မှာ အူဝဲတို့နားလည်၍သာ ပြုံးကြ သည်။ တခစ်ခစ်ရယ်၍ အဖြေပေးသည်။ အူဝဲက သူနားလည်ကြောင်း၊ မိခင်ကိုချစ်ကြောင်း၊ မိခင်နှင့် နေရတာ ကျေနပ်ကြောင်းအဓိပ္ပာယ်တို့ဖြင့် အူဝဲလေးတို့ အဖြေပေးကြပါသည်။
နိုင်ငံတကာ အမေ့အကြောင်းကို ကျွန်တော်ရှာဖွေစုဆောင်းလာခဲ့ရာ တန်ဖိုးကြီးလှသောစာပေများကို ယခုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါ၍ လွန်စွာဝမ်းမြောက်ရပါသည်။ အများအတွက်လည်း ကျေးဇူးရှိမည်ဖြစ်၍ ဖော်ပြလိုက်လိုစိတ် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ အနုပညာရှင် Mr.Howard Johnson ရေး သားခဲ့သော အမေဆိုသည့်စာစကားဂုဏ်ပြုစာစု ကဗျာလေးကို မျိုးဆက်သစ်တို့ခံစားသိရှိနားလည်နိုင် စေရန် မျှဝေလိုက်ပါ၏။ မြန်မာဘာသာဖြင့် ဘာသာပြန်ပေးသော ဘုန်းတော်ကြီး၏ဘွဲ့မှာ အရှင်ဣန္ဒာ စာရ (မုံရွာ) ဖြစ်ပါသည်။
အမြဲတမ်းမှန်ကန်သော အမေ့ဆုံးမစကားများဟု မဆုံးနိုင်သော စကားများဖြင့် အဆုံးသတ်ထားပါ သည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ အနုပညာရှင်၏ စာနုကဗျာလေးကို မြန်မာပြည်အညာဒေသမုံရွာမှ ဆရာတော် ဘုရားကမြန်မာလို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဓိပ္ပာယ်ပေါင်းများစွာ ပါရှိလှပါသော မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုချက် ဖြစ်ပါသည်။
ငွေလစန္ဒာသည် လောကဓာတ်တစ်ခွင်လုံးကို အရောင်အဆင်းဖြင့် အလှဆင်ပေးပါသည်။ လအရောင် နှင့်အေးမြမှုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြည်နူးမှုကို ခံစားရပေသည်။ လမင်း၏ကမ္ဘာကြီးအပေါ်ကျေးဇူးပြုမှု အမေ့မေတ္တာကို နှိုင်းယှဉ်ချိန်ဆတိုင်းတာကြည့်လိုက်မည်ဆိုပါက မိခင်မေတ္တာသည် လမင်းထက်နှစ် လေးသာသည်ဟု ထင်မြင်ယူဆမိကြောင်းပါခင်ဗျာ့။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှ မိန်းကလေးကို ချစ်လိုသူယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အကြောင်းမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှပါသည်။ သူချစ်နေသော မိန်းကလေးကပြောလိုက်သောစကားမှာ ‘ငါနင့်ကိုချစ်တဲ့နေ့ဟာ နင့်အမေရဲ့ရင်ကိုခွဲပြီး နှစ်လုံးသားကို ဓားနဲ့ဖြတ်ယူလာပေးတဲ့နေ့ဟာ နင့်ကိုငါချစ်တဲ့နေ့ပါပဲ”
ဤစကားကြားလိုက်သော ယောက်ျားလေးမှာအိမ်ကိုပြန်ပြေး၍ မိခင်ကြီးရင်ကိုဓားဖြင့်ခွဲ နှလုံးကိုဖြတ် တောက်ခဲ့ပြီး လက်မှာမြဲမြဲကိုင်၍ မိန်းကလေးထံပြန်ပြေးအလာမှာ လမ်းတွင်ခလုတ်တိုက်လဲသွားခဲ့ပါ သည်။ ပြင်းထန်စွာလဲကျသွားသော ယောက်ျားလေးဘေးတွင် လွင့်ကျနေသည့် မိခင်၏နှလုံးသားမှ ပြောနေသောစကားမှာ ‘သား ဘယ်နားနာသွားသေးသလဲ’ ပါတဲ့ ခင်ဗျာ။
ဤစကားမှာမိခင်၏ နှလုံးသားမှ ပြောသောစကားဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တက်ရောက်နေသော နိုင်ငံ ခြားတက္ကသိုလ်မှ တရုတ်ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်က သူတို့တိုင်းပြည်က ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုပြောပြ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မိခင်တို့အကြောင်း ပညာရှိ၊ ပညာရှင်တို့ရေးခဲ့သည်တို့ကို ပုံပမာပြုထားခဲ့သည်မှာ မိခင်မေတ္တာသည် မြင်းမိုရ်တောင်၊ သမုဒ္ဒရာကိုမင်ရည်ပမာပြု၊ ကမ္ဘာကြီးမျက်နှာပြင်ကို စာပေလွှာအဖြစ်ထား၍ ရေးသား ပြုစုခဲ့ကြပါသော်လည်း မိခင်အကြောင်း ပြည့်စုံကုံလုံသည်ဟူ၍ အဘယ်မှာရှိခဲ့ပါ၏နည်း။
ကျွန်တော်၏မိခင် (အမေ) အကြောင်းရေးရန်ရှာဖွေပြုစု စုဆောင်းခဲ့သော နိုင်ငံတကာမှ အနုပညာစာ ပေများထဲမှ လွန်စွာတန်ဖိုး အနဂ္ဂကြီးမားလှပါသော စိန်၊ ရွှေ၊ ငွေ တို့ထက်တန်ဖိုးကြီးလှပါသော အမေ့ အကြောင်းအရာတို့ကို မမောနိုင်မပန်းနိုင် ရှာဖွေခဲ့သောသူဟာ ကျွန်တော်ပါ။
အမေသည် အဖေမှာခဲ့တဲ့စကားကို မြေဝယ်မကျနားထောင်ခဲ့တာကြောင့် အောင်ခင်မြင့် B.A, Ed; B.Ed; B.E.S.;၊ အောင်ခင်တင့် B.A,s B.L, B.C.S ဘွဲ့များရကြပြီး ကျွန်တော်လည်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံ မန် ချက်စတာတက္ကသိုလ်က ဘွဲ့လွန်ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့များ ရပြီးခဲ့ပါပြီ။ အမျိုးသမီးတို့အကြောင်းပြောရာ မှာ အမေဆိုသူတို့ တာဝန်ကျေပွန်ကြပါကြောင်း မိခင်တို့အကြောင်းပါခင်ဗျား -